Ma u haabahtahay Cunto? Halkaan ayaan joognaa - CCEFS – Food Shelf serving Woodbury & Oakdale
Ma u baahantahay cunto? Haddii adiga ama qof aad taqaanid uu la dhibaatoonayo in uu helo cunto nafaqo ku fillan, Caawinta Cuntada Gurmadka Christian Cupboard waxay halkaan u joogaan in ay ku caawiyaan. Caawinteena cuntada waxay u adeegaan kuwa ku nool Woodbury, Oakdale, ama Landfall, sidoo kale sida aaga Maplewood ee bariga McKnight iyo koonfurta Highway 5. Haddii aad ku nooshahay meel ka baxsan aagaan, booqo websaydka Hunger Solutions si aad u heshid illaha kuu dhow.
Goorme ayaan imaan karaan halkaan?
CCEFS waxay furantahay maalmaha xigga:
Uma baahnid in aad balan sameysatid ama diiwaan hore.
Adiga ama qof ka socdo isla qoyska (ku nool isla ciwaanka) sida laga yaabo in aad timaatid caawinta cuntada haljeer bil walbo ee kaleendarka ah.
Waa maxay nidaamka?
Markaad timaatid caawinta cuntada, fadlan saxiix soo dhaweynta tabaruca. Waxaa laguugu wacayaa qaadashada dalabka aad timid. Fadlan ogow in laga yaabo in ay jirto sugitaan, gaar ahaan markaas goortii caawinta cuntada ay furantahay. Qaadashada, waxaad la kulmeysaa mid kamid ah tabarucayaasheena si aad uga diiwaangelisid qoyskaaga goobteena xogta. Dhammaan warbixinta waxaa loo hayaa si adag oo qarsoodi ah. Marka koowaad ee aad timaatid CCEFS, waxaan ku weydiinay in aad la imaatid:
Biilka isticmaalka hadeer la imow ee ku qoran ciwaankaaga hadeer
Aqoonsiga oo xubnaha oo dhan ah ee qoyskaaga (shatiga gaari kaxeynta, shahaadada dhalashada, kaarka caymiska caafimaadka, kaarka amniga bulshada, baasaboorka, iwm.)
Waxaa kaliya oo aad u baahaneysaa in aad la imaatid aqoonsiga xubnaha qoyskaaga marka koowaad ee aad timaatid CCEFS. Kadib markaad xaqiijiso warbixintaan, waxaa lagu weydiinayaa in aad la imaatid aqoonsigaaga iyo biilka hadeer waqti walba ee aad timaatid. Waxaan sidoo kale weydiinay in aad la imaatid bacaha bagaashka, sida saadkeena uu xadidanyahay.
Caawinta tabaruca caawinta adeega, waxaa kuu suurtogaleyso in aad dooratid bagaashkaaga. CCEFS waxaa ka go’an in ay bixiso cuntooyin nafaqo kala duwan leh, sida miraha iyo qudaarta cusub, hilibka, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, iyo xitaa sheeyada lagu daray cuntooyin gaar ah (xasaasiga buunshada, sonkorta hooseyso, iwm.). Waxaan sidoo kale bixinaa qaar kamid ah waxyaabaha warqada, aqabyada nadiifinta, cuntada xayawaanka, xafaayadaha, iyo sheeyada daryeelka gaarka ah (shaambada, saabuunta, aqabyada daryeelka haweenka, iwm.). Tirada aad heleysid waxay ku xirantahay cabirka qoyskaaga.
Helitaanka sheeyada gaarka ah waxay ku kala duwanaanayaan sida ku saleysan waxa aan u helnay sida deeqda oo waxaa usuurtogaleyso in laga iibsado iskaashiyadeena. Fadlan ogow in adeegashada ay dhamaato nus saac ka hor inta caawinta cuntada aan la xirin. Haddii aad timaadtid nus saaca ugu dambeeyo, waxaad heleysaa isla tirada cuntada laakin dib ayaan kuugu diyaarineynaa.
Miyaan u baahannahay in aan iska diiwanageliyo ama balan sameeyo?
MAYA diiwaanka hore ama balanta waxaa looga baahanyahay si markaas loo booqdo CCEFS. Waa in aad buuxisaa foomka gaaban marka kugu horeyso ee aad timaado. Si markaas aad u dajijisid nidaamka diiwaankaaga waxaa laguugu soo dhaweynayaa in aad daabacato oo aad ku buuxisid foomkaan (TEFAP & Siideynta) guriga, laakin waxaan sidoo kale haynaa koobiyo daabacan marka aad timaatid. Dhammaan warbixinta foomkaan waxaa loo hayaa si adag oo qarsoodi ah.
Foomkaan aad buuxineysid wuxuu leeyahay labo qeybood:
Qeybta #1: TEFAP (Barnaamijka Caawinta Cuntada Gurmadka): Macmiisha waxay u buuxiyaan foomkaan sababtoo ah waxaan qeybinaa badeecooyinka cuntada dowlada. Foomka TEFAP wuxuu nagu caawinayaa fahamka ilaha kale ee macmiilkeena isticmaalo, sidoo kale sida horay loogu ogaado sida aad ugu qalantid in aad isticmaashid caawinta cuntada.
Qeybta #2: Siideynta: Qirashadaan in aad ogolaatay cuntada sida ay tahay, iyo aad u siideysid CCEFS masuuliyadaha la xiriiro cuntada aad heshid. Fadlan ogow in ciwaanka i-meelka lagu codsaday foomkaan uu iqtiyaar yahay. Waxaa isticmaalo caawinta cuntada si laguu ogeysiiyo barnaamijyada gaarka ah ama xiritaanka degdega. Haddii aadan hadeer heleynin adeegyada kale waxaad xaq uyeelan kartaa, Waxaad sidoo kale u ogolaan kartaa CCEFS in ay la wadaagto warbixinta TEFAP iyo xisbiyada sadexaad, si markaas ay kaala soo xiriiraan adeegyadaan.
Gelitaanka iyo Luuqadaha
CCEFS way geli karaan dadka jir ahaan curyaan ah, oo ay ku jiraan gaariyada curyaanka. Kuwa leh curyaannimada aragtida iyo barashada waxaa lagu dhiirogelinayaa si loo weydiiyo tabarucayaasha ama xubinta shaqaalaha CCEFS in ay u aqriyaan foomamka ama qoraalada kale iyaga. Caawinta cuntada, waxaan isticmaalnaa qoraalo qoran si aan ula xiriirno dadka qaba dhibaatooyinka maqalka ama hadalka. CCEFS sidoo kale waxay isticmaashaa Adeega kale ee Kooxda Minnesota (1-800-627-3529) si ay u qaabisho wacitaanada ka imaanaya dadka qaba curyaannimada maqalka ama hadalka. Waxaan leenahay qaar ka mid ah tabarucayaasha ku hadlo luuqado kale, laakin waxaan isticmaalnaa qadka luuqada sida loogu baahanyahay.
Ka hel jaheynada caawinta cuntada halkaan
Ma raadineysaa tilmaamaha diyaarinta cuntada? Ka fiiri Fiicnaanta iyo Raqiiska, buugga karinta fikardo buuxo ee cuntooyinka ee miisaaniyad aad u yar. Waxaad ka dajisan kartaa PDF bilaash ah halkaan ama fiiri koobiga buugga karinta marka aad joogtid caawinta cuntada. Waan ku farxeynaa in aan koobiyo sameyno ee wixii tilmaamo ah ee aad daneyneysid.
Su’aalaha? Ka fiiri Su’aalaha iyo Jawaabaha Caawinteena Cuntada.